Gadzira marongero ekugadzirisa mune iyo Photos app | Ndinobva mac
Gadzira marongero ekugadzirisa muApp Photos
Chimwe chezvinhu icho Apple chave chichigadzirisa pamwe nekupfuura kwemacOS vhezheni ndiko kushanda kwatinogona kugadzirisa mapikicha. Mazuva ano, iko kunyorera kunodaidzwa kuti Mapikicha uye yakavandudza zvakanyanya kana zvasvika kune ekugadzirisa mafoto ekudzora.
Kana isu tikazarura iyo application uye sarudza imwe kupikisa, tinogona kubaya muchikamu chepamusoro kurudyi chehwindo pabhatani reHedha, mushure meizvozvo Isu tinoratidzwa akasiyana akasiyana masisitimu ayo atinogona kuita akawanda kugadzirisa mumufananidzo.
Ikozvino, iwo masiraidhi anoratidzwa haatibvumire isu kushandisa chiyero chemhedzisiro zvachose, senge, semuenzaniso, iyo Kupenya uye ndeyekuti kuti vakwanise kuita izvi vanofanirwa kuve vakareba kwenguva yakareba uyezve kutaridzika muiyo interface yemifananidzo application ingatambura. Nechikonzero ichi, Apple inogara yakavanza mabhatani anoita kuti zvimwe zviito zvisingaitwe pachiratidziro zvionekwe patinodzvanya makiyi anodiwa.
Mune ino kesi, kana isu tiri semuenzaniso mukati mekutsvedza Luz, tinoratidzira Sarudzo uye kana isu taona kukosha kwemabhawa imwe pazasi peimwe, tinodzvanya kiyi nezvechisarudzo. Iwe uchaona kutaridzwa kweanopopota mukugadziriswa kwemetric yebhawa iyo inotiyambira kuti mamwe maitiro anokwanisa kusvika kwete chete kubva -1 kusvika +1 asi iko zvino kubva pa -2 kusvika +2.
Mhedzisiro iyi haisi yeese marongero saka kana iwe uchida kuve neruzivo rwekuti ndedzipi dzinoshanduka, iwe unofanirwa kungozvifambisa nekiyi yekusarudza yakadzvanywa uye nemusoro kwaungaite chiito. Chokwadi, Apple inogara iine kadhi kumusoro kwayo ruoko, uye mainjiniya esoftware vanoita basa ravo nemazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Gadzira marongero ekugadzirisa muApp Photos
Sonos inotangisa $ 2 Sonos Imwe 349-pack kuti ipindure kune HomePod kuvhurwa
Yakakura kuderedzwa pamutambo F1 2017 yeMac